खुलेको भोलिपल्टै बन्द भयो तातोपानी नाका- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २०, २०७७ अनिश तिवारी
सिन्धुपाल्चोक — सोमबार खुलाइएको तातोपानी नाका भन्सारमा कार्यरत तीन मजदुरमा मंगलबार चीन क्षेत्रमा कोरोना पुष्टि भएपछि मंगलबार पुन: बन्द भएको छ । यहाँबाट चीनतर्फ सामाग्री लोड अनलोड गर्न गएका ३३ मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै स्वाब संकलन गरिएकोमा अहिलेसम्म ७ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
यसअघिका सीमाक्षेत्रका चार संक्रमित मजदुरको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र उपचार नसकिँदै मंगलबार ३ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि चीनले वारीपारी कन्टेनर आउजाउ गर्न दिएको छैन ।
तत्काल ठप्प गरिएको तातोपानी नाका ‘नयाँ मोडालिटी’मा गएर सहज बनाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘यसबारे दुवै पक्षबीच गहन छलफल भइरहेको छ, नयाँ मोडालिटीबाट चाँडै नाका सहज बनाएर छाड्नेछौं,’उनले भने ।
गएको १३ असोजमा नेपाल चीन अधिकारीबीच मितेरी पुलको छलफलले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने र प्राकृतिक विपतबाट बच्ने साइरन राख्नेजस्ता शर्तमा तातोपानी नाका खुलाउने सहमति भएको थियो ।
यसअघि चीनको खासा र न्यालम क्षेत्रमा थन्किएका डेढ सय कन्टेनरका रेडिमेड सामाग्री दसैंैअघि राजधानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर नाका सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । आइतबार बेलुकीदेखि सोमबार बिहानसम्म चीनको खासाबाट १२ वटा कन्टेनरबाट लत्ता कपडा, गार्मेट सामग्रीसहित केही तयारी सामाग्री तातोपानी भित्रिएको थियो ।
तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीका अनुसार यसअघि चीनले मितेरी पुल पारी स्टोर गरेर राखिएको सामाग्री लिन चालक र मजदुर २९ जना ११ वटा कन्टेनर लिएर मितेरी पुलमा पुग्ने गरेका थिए । तिब्बतको स्थानीय प्रशासन नेलाम काउन्टीले खासाभन्दा करिब ३५ किमिमाथिको ‘क्यानोन कु’ ताल फुट्ने सम्भावना भएकाले तातोपानी नाकाबाट कारोबार नर्गन भन्दै नागरिकलाई सूचना जारी गरेपछि पछिल्लो पटक नाका बन्द थियो । सबै चालक र मजदुरको ५ /५ दिनमा परीक्षण गर्ने क्रममा कोरोना भाइरस देखिएका चार जनालाई सदरमुकाम चौतारास्थित आइसोलसनमा राखेर उपचार गरिँदैछ । ती चार जनाको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ नसकिँदै आहिले पुन: ३ जनाका कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि सीमाबासी आत्तिएका छन् ।
यस्तो छ नयाँ मोडालिटी
चीनको सुख्खा बन्दरगाह जाङ्बु पोर्टमा भएपनि आयात गरिने सामाग्री भने चीनको गोन्जओ, सिगात्से हुँदै खासासम्म ल्याइने गरिएको छ । पीसीआर मेसिनसहित दुई डाक्टरको मेडिकल समूहले सम्पूर्ण मजदुरको कोरोना परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ ।
एक चिनियाँ अधिकारीका अनुसार ‘नयाँ मोडालिटी’ अनुरुप चीनको खासा क्षेत्रबाट चिनियाँ कन्टेनरले ल्याएको नेपालको भन्सार यार्डमा ल्याएर सामाग्री स्टोर या खसालेर राखिदिनेछन् । त्यसलाई सेनिटाइज गरिसकेपछि भन्सार प्रोटोकल पूरा गरेर नेपालले लैजाने मोडालिटी ल्याउनेमा स्थानीय प्रशासन र भन्सार टिम छलफलरत छन् ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ १६:१८
अनशनरत डा. केसीको समर्थनमा नक्सालमा प्रदर्शन
आश्विन २०, २०७७ तस्बिर : केशव थापा
काठमाडौँ — मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राख्दै २३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा मंगलबार नक्सालमा प्रदर्शन भएको छ । डा. केसीले भदौ २९ गते जुम्लाबाट अनशन थालेका थिए ।
आवासीय चिकित्सक संघ, गोविन्द केसी अलायन्स र नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटीको अगुवाईमा भएको प्रदर्शनमा चिकित्सक र सर्वसाधरणको सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागीले 'डा केसी व्यक्ति हैन आवाज हुन्', 'डा केसी हामी तिम्रो साथ छौं', 'सेभ डा गोविन्द केसी' लगायत नारा, सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । सरकारले वार्ता टोली बनाइ तत्काल माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र डा केसीको जीवन रक्षाको माग उठिरहेका छन् । तर सरकारले त्यसलाई गम्भीर रुपमा नलिएको डा केसीका समर्थकहरुको आरोप छ ।
मंगलबार भने शिक्षा सचिवसहित ३ जनाको टोलीले डा केसीलाई भेटेर अनशन रोक्न आग्रह गरेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ १६:१४